I-CSM Bucharest isengcupheni yokuhlakazwa. Abadlali abayisithupha kuphela abeza ekuziqeqesheni | 1xbet
ISpain inqobe u-26-22 (13-12) ibhekene neSlovenia kanti izodlala umdlalo wamanqamu omkhulu ngeSonto, enkampanini yaseDenmark, ehlule iCroatia ngo 30-24. Abahluliwe bazodlalela indondo yethusi ngoMgqibelo.
Yomibili imidlalo yamanqamu izokuba seBarcelona. Ophethe le ndebe kuma-edishini amabili edlule, iFrance, ukhishwe kuma-quarterfinal, ehlala endaweni yesi-6 kuphela.
ISpain ibuyela kowamanqamu we-World Championship ngemuva kweminyaka engu-8. Ngo-2005, iSpain yanqoba isicoco somhlaba, okuwukuphela kwaso ohlwini, ngemuva komdlalo wamanqamu neCroatia (amaphuzu angama-40-34).Ngaleso sikhathi, u-Alexandru Buligan naye wayeseqenjini laseSpain, njengomqeqeshi wesibili. > Amathegi: ubuqhawe be-handball yomhlaba, i-spain denmark, i-handball yespain, i-denmark handball, i-cm handball
Umpetha we-handball yamadoda aseRomania, u-HCM Constanţa, ukwazile ukuqedela, ngoLwesihlanu, ukudluliselwa kwabadlali ababili be-CSM Bucharest, iqembu ingozi enkulu yokuhoxa kwiNational League Ngenxa yezinkinga zezezimali.
Ngakho-ke, uPredrag Vujadinovic (29 ubudala) kanye nepivot Albert Cristescu (20) bazodlala kusukela ekubuyiseni kwe-HCM Constanţa.
Laba bobabili bazodlala iseshini yokuqala yokuziqeqesha neqembu elisha kuphela ngesonto elizayo, lapho i-HCM izobuya ekuqhudeni kwayo eSerbia.Umpetha waseRomania uphinde wadlala eKladovo umdlalo wokuqala wokuqinisekisa selokhu kuqale amalungiselelo, ehlula ngo-42-20 RK Zajecar, indawo yesi-9 kwiligi yokuqala.
Amathegi: hcm constanta, csm bucharest, predrag vujadinovic, handball bankruptcy
Iphupho le-SCM Bucharest lokufinyelela e-European Cup livame ukushabalala ngenxa yezinkinga zezezimali.Iningi labadlali likhethe ukulishiya iqembu, ngakho-ke uVasile Stângă unabadlali abayisithupha kuphela be-handball abasele.
Abasubathi sebengakhokhelwe izinyanga ezingaphezu kwezintathu, ngakho-ke baqale ukulishiya iqembu.
IBucharest iqale isizini ngephrojekthi yokuvelela futhi ihlose ukuzibekisela indawo enkomishini yase-Europe. Ngemuva kokuphela kohambo, i-CSM isendaweni yesi-5 kuNational League, kepha uVasile Stângă akazi noma iqembu lakhe lizokwazi ukuqeda kule sizini: